Gudoomiyihii Maxkamadda Sare oo Muqdisho ku geeriyooday
Warar Keydmedia Online | 24 November 2010
Muqdisho(Keydmedia) Waxaa xalay gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyooday gudoomiyihii Maxkamadda sare ee dowladda Kmg ah Max’ud Cumar Faarax Indhabuur.
Dhibaatada Rayidka gaartay 2009-2010 oo la soo bandhigay
Warar Keydmedia Online | 23 November 2010
Muqdisho(Keydmedia) Hey’adda gaadiidka gurmadka deg dega ah ee lifeline Africa ayaa maanta soo bandhigtay tirada qasaaraha ka gaaray shacabka Soomaaliyeed dagaalada iyo duqeymaha macana daradda ah ee ka socda magaalada Muqdisho.
KEYDMEDIA OO SOO BANDHIGI DOONTO FILIM XIISA LEH
OGEYSIIS(KEYDMEDIA) Dhamaan macaamiisha keydmedia waxaa lagu wargelinayaa in saacadaha ina soo aadan ay bogga keydmedia si toos ah uga daawan doonaan fowdadii, buuqii iyo dagaalkii ka dhacay shalay kulankii baarlamaanka.
Amisom oo shacab ku xasuuqday Muqdisho
Muqdisho(Keydmedia) Ciidamada Amisom ee taageera Dowladda Kmg ah ayaa maanta rasaas ooda waxa ay kaga qaadeen shacab Soomaaliyeed.
Real oo ciyaariyahan Miisan leh weyn doonta kulanka Ajax
Sports(Keydmedia) War qoraal ah oo la soo dhigay Bogga Internet-ka ee naadiga Real Madrid ayaa lagu sheegay in weeraryahanka reer Argentin Gonzalo Higuain uu ka maqnaan doono kulanka Real ay la yeelan doonto Ajax.
Soomaali socdaal ah oo Musanbiik lagu xiray
Musanbiik(Keydmedia) Wararka aynu ka helnay Dalka Musanbiik ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada xaduudaha dalkaasi ay gacanta ku dhigeen soomaali ka carartay dagaalada ka socda Dalka.
Xeer ilaalinta oo ka hadashay is heysadka Baarlamaanka
Muqdisho(Keydmedia) Xeer ilaaliyaha qaranka C/llaahi Daahir Barre ayaa sharci darro ku tilmaamay talaabada uu gudoomiyaha Baarlamaanka ku doonayo in codka kalsooni siinta xukuumadda looga dhigo qarsoodi.
Bariise”Booliska Cunug ayuu wado ka helay”
Muqdisho(Keydmedia) Afhayeenka ciidamada Booliska dowladda KMG ah ayaa sheegay in ciidamada Booliska dowladda ay shalay laga helay wado dhexdeeda.
Amar lagu soo rogay iskuulada Jawhar
Jawhar(keydmedia) Maamulka ka taliya gobalka Sh/dhexe ayaa soo saaray amar ah in wax laga badalo qaab howl galka iskuulada ku yaala magaalada Jawhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe
Dhalinyaro lagu toogtay Suuqa Xoolaha
Muqdisho(Keydmedia) Kooxaha dowladda dagaalka kula jira ayaa shalay galinkii danbe fagaare ku yaala suuqa xoolaha waxa ay ku toogteen laba ruux oo dhalinyara ah.
Dhageysiga Tafsiirka Shiikh Dirir oo jawhar laga diiday
Jawhar (Keydmedia) Wararka aynu ka heleyno magaalada Jawhar ee xarunta Gobalka Sh/dhexe ayaa sheegaya in idaacada ku taala magaaladaasi loo diiday baahinta casharka tafsiirka ee uu duubay Shiikh Max’ed Cumar Dirir.
Duqeyn dad ku dishay Muqdisho
Muqdisho(keydmedia) Duqeymo kale duwan oo ka dhacay maanta gudaha magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay dad rayid ah iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda KMG ah.